EPOXY PATIOS (IINDIDI ZE-EPOXY FLOORING) - IIPATIO KUNYE NEEDEKSI
Eyona Iipatio Kunye Needeksi Epoxy Patios (Iindidi ze-Epoxy Flooring)
Nasi isikhokelo sethu kwii-epoxy patios kubandakanya ukuba yintoni, iintlobo ezahlukeneyo zomgangatho we-epoxy kunye neendleko. Xa kuziwa ekuyileni ipatio yamaphupha akho, kufuneka uqwalasele yonke into: ukuya ezantsi kumgangatho.
Uhlobo olunye lophahla olunikezela okuninzi kwiipatiyo yile epoxy nokwadala ukuba . Ayisiyonyaniso efikelelekayo kuphela kodwa iqinisekisa inqanaba lokuqina, lokuphila ixesha elide, kunye nokuninzi kokukhetha koyilo onokukhetha kulo.
Apha, siza kujonga kuyo yonke into ofuna ukuyifumana malunga nepatio epoxy yakho.
Yintoni umgangatho we-Epoxy Patio?
Iingcamango ze-Epoxy Patio
Ipoxy Concrete Patio
Ipeyinti eyi-Epoxy yePatio yangaphandle yeKhonkrithi
Epoxy nentlaka Patio
Ukwaleka kwePatio Epoxy
Ukubuyiselwa kwakhona kwe-Epoxy Patio
I-Epoxy Patio FAQs
Ngaba i-Epoxy ilungile kwiPatio yangaphandle?
Ngaba unako ukubuyisela ngaphezulu kweKhonkrithi?
Ixabisa malini ukuba nomntu we-Epoxy Garage Floors?
Ngaba umgangatho we-epoxy ukufanele?
Imigangatho ye-epoxy patio yenziwa kusetyenziswa icandelo lokudibanisa elinendawo ezimbini zokuhlanganisa indawo yentlaka kunye nenxalenye yokuqina. Lo mxube ulwelo emva koko usetyenziswe ngexesha elimiselweyo njengengubo ye-epoxy ngaphambi kokuba iqale ukuqina.
I-primer kunye ne-finisher zihlala zisetyenziswa ngaphambi nasemva kwengubo ye-epoxy yokuqinisekisa ukubambelela kunye nokuqina. Imveliso egqityiweyo ngumgangatho owomeleleyo onokumelana nokugcwala kwabantu kwaye kulula ukuwucoca kunye nokuwugcina.
Umgangatho we-epoxy luhlobo olomeleleyo lophahla olunezinto ezininzi ezilungileyo kunye nezinto ezimbalwa onokuzithetha. Oku kuthetha ukuba unokuphumla ngokulula usazi ukuba unendawo ethembekileyo phantsi kweenyawo zakho.
Ngaphambi kokuba siqale kwizinto ezithile, nangona kunjalo, Nazi ezinye zezinto ezisisiseko ekufuneka uyazi malunga ne-epoxy patio phantsi.
Okokuqala, i-epoxy yomelele ngokungaqhelekanga kwaye iyamelana nomonakalo obangelwe kukugcwala kwabantu. Ke, nokuba uchitha ixesha elininzi kwipatio yakho kwaye uhlala uneendwendwe, akunakulindeleka ukuba ubone ukuba umgangatho uyongena nje ukuba ufakwe kakuhle.
Iya kuhlala ixesha elide nayo. Unokulindela ukusetyenziswa kweminyaka eli-10 okanye ngaphezulu. Kwakhona, oku kude kube ngoku kufakwe ngokufanelekileyo kwaye kukhathalelwe. Nokuba ayinamanzi kodwa ulumke ungatyibiliki xa umanzi njengoko ukutyibilika kwe-epoxy kunokuba kuhle kakhulu.
Okokugqibela, i-epoxy ilungile kuba ibonelela ngexabiso elininzi. Oku kuyonyuswa yindlela engabizi kakhulu i-epoxy flooring. Siza kujonga ngokusondeleyo ukwehla kwamaxabiso kamva.
Xa kuziwa kwi-epoxy patios, unokukhetha okuninzi. Oku kungenxa yokuba i-epoxy ibonelela ngeendlela ezininzi zoyilo kubanini bamakhaya. Ungasebenzisa yonke into malunga ne-epoxy ukusuka kumbala wezinto kunye nokudibanisa ezinye izinto ekwenzeni ubume obukhethekileyo.
Kunokubonakala kunzima kakhulu ukukhetha uyilo kukhetho oluninzi ekuqaleni. Kungenxa yoko le nto siza kuzophula ezinye zeembono onokuzama ngazo nge-epoxy. Oku kuya kukunceda ufunde ukuba yeyiphi uyilo oluthandayo kunye nokuba yintoni enokulingana nepatio yakho.
Ipoxyxy kufuneka isetyenziswe kwindawo ethe tyaba nehlala ixesha elide. Ngokufanelekileyo, oku kuya kuba yindawo engaphezulu kodwa eyomileyo ngokwaneleyo ukuba amanzi angayi kubanjiswa xa kufakwa i-epoxy.
Ngenxa yezi ndlela, uninzi lwabantu lufaka i-epoxy ngaphezulu komgangatho okhoyo wekhonkrithi. Ukuba akukho nto kuloo ndawo ngaphambili, ukufaka umaleko wekhonkrithi kunokuba linyathelo lokuqala!
Icebo apha kukuqinisekisa ukuba ikhonkrithi yomile kwaye ayizange itywinwe. Nje ukuba ikhonkrithi itywinwe, ilahlekelwa sisibonelelo sokuba yinto enamaphiko.
Ipeyinti ye-epoxy yayenziwe kwasekuqaleni kwimizi-mveliso kodwa lukhetho olukhulu kwiipatios zasekhaya nazo. Ngokungafaniyo nomgangatho we-epoxy osemgangathweni, le nto yipeyinti ye-acrylic ye-latex ebonisa i-epoxy njengenye yezithako zayo.
Le yindlela elula yokunika ipatio yakho yekhonkrithi umaleko ophezulu we-epoxy flooring ukwandisa ukuzinza kwayo. Kulungile, ipeyinti ihlala okwexeshana kwaye ifuna inkathalo encinci ngelixa kulula ukuyicoca. Kuba iyamelana nemichiza, umhlwa kunye nobushushu, akunakulindeleka ukuba wenze umonakalo ongapheliyo ngokulula.
Njengoko sele sitshilo, ungaxuba izinto ezahlukeneyo kumgangatho wakho we-epoxy. Oku kuhlala kuza nesibonelelo sokwahluka kobume bomgangatho wepatio ngobuhle. Ngokuchasene noko, i-epoxy igudisa umphezulu ngaphandle kwento exutywe kuyo, iyenza izinzile kwaye ikhululeke ukuhamba kuyo.
Isiqithi sekhitshi esinendawo yokuhlala
Olunye ukhetho lokufezekisa oku kukusebenzisa iingqalutye kumxube we-epoxy. Oku kuyakunika i-epoxy patio yakho ibambe indalo kunokuba ibe yindawo yemizi-mveliso enxulunyaniswa nomgangatho we-epoxy.
Ipea yamatye, efana namatye amatye, igudile kunokuba krwada okanye ijagjwe njengegrabile yokuqhuba rhoqo.
Olu hlobo lwegrabile luza nobukhulu obahlukeneyo, ukuvumela ukuba wenze ngokwezifiso iinkcukacha ezintle kumgangatho wepatio yakho. Obu bungakanani buqala nge-intshi ukuya kwi-intshi ye-intshi.
Umgangatho we-pea gravel epoxy patio flooring ufumaneka nakwimibala emininzi kubandakanya ukhetho oluqhelekileyo lomthunzi omdaka ngombala, iithoni ezahlukeneyo ezingwevu, imhlophe emhlophe, kunye negravel eguqukayo. Ukuxutywa kwi-epoxy, baya kwenza indawo eqinileyo.
Bona Okuninzi izimvo zegrabile zegrabile Apha.
Njengoko besesitshilo, zininzi izibonelelo zokusebenzisa ezi zimvo ukwenza i-epoxy resin patio. Izinto ezibandakanyekileyo ekwakheni i-epoxy resin patio ikunika indawo eninzi yokwenza ubuchule kunye nokuhlaziya ipatio yakho ukuba ijongeke ngokwenene.
Ukongeza, ukhetho lwe-epoxy resin patio lukhetho olunokuxhomekeka kuwe. Kwipatio, ngokukodwa, uya kuba nethuba lokuxhomekeka kwi-epoxy resin esebenza njengomphezulu ongenamanzi.
Ngaphandle kokufumana ukutyibilika kancinane xa kumanzi, awuzukuba naxhala malunga neziphumo ezibi zemvula kwimoo yakho ye-epoxy resin.
Kwangoko, besixubushe ngepeyinti ye-epoxy kunye nokubekwa kwe-epoxy ukutyabeka ngaphezulu kwesamente. Kungenxa yokuba unganxiba umgangatho okhoyo kwi-epoxy, ngokuxhomekeke ekubeni izinto ezisisiseko zisifanele, njengekhonkrithi.
Oku kunganciphisa iindleko kunye nabuphi na ubunzima obunxulumene nokufaka umgangatho we-epoxy. Lilonke, isambatho se-epoxy lukhetho olufanelekileyo kwipatio.
Xa uthetha ngokufaka i-epoxy patios, zininzi izinto ezithethwayo malunga nokuvuselela ikhonkrithi engezantsi kwayo. Oku kuya kunceda ukuqinisekisa ukuba unesiseko esomeleleyo sokufaka i-epoxy flooring kuyo. Kwaye oku kuyakunceda ukulungisa nawuphi na umonakalo kwikhonkrithi ezinje ngeetshiphusi okanye iintanda ezinokuphazamisa ufakelo lwe-epoxy.
Nangona kunjalo, ukuvuselelwa komgangatho wekhonkrithi kuza neendleko. Ngethamsanqa, iphantsi kakhulu! Unokulindela ukuhlawula ngaphakathi kuluhlu olubanzi lweedola ezi-3 ukuya kwezi-15 ngeenyawo zenyawo nganye.
Indawo egudileyo yekhonkrithi endaweni yoyilo oluntsonkothileyo, nangona kunjalo, unokuqikelela kufutshane nesiphelo esisezantsi somboniso.
Umgangatho we-epoxy ulungelelene kuluhlu lokusetyenziswa kwangaphandle, kubandakanya nepatio yakho! Oku kuyinyani ngezizathu ezimbalwa.
Ukuqina komgangatho we-epoxy kwenza ukuba ibe yinto ebaluleke kakhulu xa isiza kwiindawo ezigcwele abantu abaninzi ekhayeni lakho apho abantu bachitha ixesha elininzi. Ngaphezulu koko, unokuyila ipatio yakho ngendlela othanda ngayo. Umgangatho we-epoxy uyafumaneka kwimibala eyahlukeneyo, ukwenziwa, kunye nokukhethwa koyilo, ezinye zazo esizijongile ngasentla.
Ekuphela kwento ekufuneka uyiqaphele malunga ne-epoxy flooring xa ifumile. Ubusuku obunesaqhwithi abuzukulimaza imigangatho yepatio kodwa bunokubenza bube mtyibilizi!
Ayisiyiyo kuphela i-epoxy ngaphezulu kwekhonkrithi kodwa i-epoxy flooring ihlala ifakwa kwikhonkrithi. Kungenxa yokuba ibonelela ngesiseko esiqinileyo, esigudileyo sokufaka i-epoxy flooring kuyo. Oku kunokunceda ukulindeleka kokusebenza okuphezulu komgangatho we-epoxy kuba ikhonkrithi inakho ukuphatha ukugcwala kwabantu kwaye inobomi obude ngokubanzi.
Oku kuyasebenza kuba i-epoxy ifuna umphezulu omdaka wokubambelela kuyo. Okwangoku, nabani na ofaka umgangatho we-epoxy kufuneka aqiniseke ukuba ikhonkrithi eya kuba ngaphantsi kwayo inyangeke ngokupheleleyo kwaye nakuphi na ukutyhoboka okanye iitshiphusi ziyalungiswa.
Ikhonkrithi nayo kufuneka yomile ngokupheleleyo kwaye bekungafanele ukuba ibitywinwe ngaphambili. Ungakujonga oku ngokubeka isixa esincinci samanzi phantsi. Ukuba ngamaso aphezulu kunokuba ungene ezantsi kwikhonkrithi, umgangatho kungenzeka ukuba utywiniwe.
Kwangoko besikhankanyiwe ukuba i-epoxy flooring ngesiqhelo ayibizi xa kuthelekiswa nolunye ukhetho lwakho. Nangona kunjalo, xa kuziwa nakuphi na ukulungiswa kwekhaya, ukwazi uhlahlo-lwabiwo mali oluthile kubalulekile.
Ngokubanzi, unokulindela ukuba umgangatho we-epoxy ukubize phakathi kwe- $ 3 kunye ne- $ 12 ngonyawo wesikwere. Iindleko zeprojekthi yakho ziya kuxhomekeka kwizinto ezahlukeneyo kubandakanya nokuba mkhulu kangakanani umgangatho wegaraji yakho kwaye apho ufumana khona izinto zokusebenza kunye nabasebenzi.
Njengayo nayiphi na into, ishishini elithile osebenza nalo linamaxabiso ahlukeneyo. Ukwaphula oku phambili, izixhobo kunye nezixhobo oza kuzifuna phakathi kwe- $ 2 kunye ne- $ 5 ngonyawo wesikwere ngelixa ufakelo lobuchwephesha longeza malunga ne- $ 1 ukuya kwi-7 yeedola kwisikwere seendleko. Funda ngakumbi malunga Izimvo zokwenza igaraji Apha.
Ekugqibeleni, imigangatho ye-epoxy ngokuqinisekileyo kufanelekile. Nangona zihlala zifikeleleka kakhulu, zikunika iintlobo ezahlukeneyo zoyilo onokukhetha kuzo kubandakanya ukuthungwa kunye nombala.
Ukongeza, kukho izibonelelo ezahlukeneyo ezenziwayo kumgangatho we-epoxy kubandakanya ixesha elide lokuphila, ukuhlala ixesha elide ngokwaneleyo ukumelana nokugcwala kunye nomonakalo wempembelelo, kwaye ngokubanzi awunamanzi.
Ukuqinisekisa ukuba imigangatho yakho ye-epoxy ikulungele ukuhambisa konke abanako, qiniseka ukuba zifakwe ngokuchanekileyo kwaye ziya kukugcina iminyaka elishumi ezayo okanye ngaphezulu!
Ucinga ntoni ngeepoxy patios? Sazise apha ngezantsi. Kuyilo olunxulumene ngakumbi ndwendwela iphepha lethu malunga Izimvo zepatio ezivalelweyo .
indlela yokubopha iqhina ngokukhawuleza
iilokhwe ezintle zokunxiba emtshatweni
umtshato enkosi ikhadi ettiquette